Nagu saabsan - Qaadista JITO
JITO Bearing waa shirkad cilmiyeed iyo farsamo faragelin ku sameysa cilmi baarista iyo horumarka, soo saarida iyo ganacsiga. Waa xubin ka mid ah ururka warshadaha dhalista shiinaha, cutub dawladeed oo ka tirsan ururinta dhalista gobolka hebei, oo ah shirkad farsamo heer qaran ah. Maamulaha guud Shizhen Wu waa gudiga joogtada ee shirka wadatashiga siyaasada ee gobolka guantao. Tan iyo markii la aasaasay, waxaa loo heellan yahay soo saarista tayo sare iyo saxitaan saa'id ah, oo leh heerka tayada P0 (Z1V1), P6 (Z2V2) iyo P5 (Z3V3). Sumadda diiwaangashan waa JITO oo sidoo kale ka diiwaan gashan Midowga Yurub. Shirkadda ayaa heshay ISO9001: 2008 iyo IATF / 16949: 2016 nidaamka shahaadeynta, waxay leeyihiin shatiyado badan oo R&D ah, waxaana la siiyay "hebei qandaraasle-ixtiraam iyo shirkad deyn lagu kalsoonaan karo" oo ay siisay hay'adda horumarinta amaahda ee hebei iyo machadka cilmi baarista amaahda ee ganacsiga ee gobolka, iyo "sayniska iyo teknolojiyadda gobolka hebei SME" oo ay soo saartay waaxda sayniska iyo tikniyoolajiyadda ee gobolka, iwm oo ay soo saareen shahaado. Warshadda cusub ayaa la dhammaystiray oo la adeegsaday 2019, iyada oo leh aag dhismeedu ka badan yahay 10,000 oo mitir murabac.
Waxyaabaha JITO waxaa si ballaaran loo isticmaalaa in baabuurta, baabuurta, baabuurta injineernimada, mashiinada beeraha, samaynta warqad, awood-abuurka, macdanta, metallurgy, qalabka mashiinka, batroolka iyo tareenka iwm Si loo siiyo adeeg wanaagsan macaamiisha iyo in ay ku habboon tahay macaamiisha in u imow inaad ka wada hadashid oo aad iskaashi la yeelatid, shirkadeena ayaa aasaastay Liaocheng Jingnai Mashiinka Qaybaha Co., Ltd ee magaalada Liaocheng, gobolka shandong. Baabuurtu waa mid aad u habboon, kaliya waxay u baahan tahay 1 saac si ay u timaado saldhigga tareenka galbeed ee Ji'nan iyo 1.5 saacadood oo ay ku timaaddo garoonka diyaaradaha ee Jinan yaoqiang. Shirkaddu waxay leedahay koox iibin heer sare ah iyo kooxda R & D, taas oo ka dhigaysa JITO inay noqoto mid caan ku ah berrinka.
Si loo wanaajiyo caannimada, shirkadeenu waxay ka soo qaybgashaa bandhigyo fara badan oo adduunka ah sanadkasta, waxaanan sii wadaynaa inaan kaqeybqaado kalfadhi kasta oo ka mid ah bandhig xirfadeed oo caalami ah oo shanghai ah, soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha shiinaha, carwada caalamiga ah ee gawaarida ee Beijing, Shanghai frankfurt qaybaha auto iwm .
Waxaan leenahay gebi ahaanba wax soo saar, oo had iyo jeer waxaan si adag u xakameynaa geeddi-socod kasta oo wax soo saar, laga bilaabo sameynta alaabta ceyriinka ah, u jeesashada daaweynta kuleylka, ka soo shiidida ilaa isku imaatinka, nadiifinta, saliida ilaa xirxirida iwm Hawlgalka geeddi-socod kasta ayaa aad u taxaddar badan. In geeddi-socodka wax soo saarka, iyada oo loo marayo is-kormeerka, raac kormeerka, baaritaanka sampling, kormeerka buuxa, sida adag ee kormeerka tayada, waxay ka dhigtay dhammaan bandhigyada inay gaadhaan heerka caalamiga ah. Isla mar ahaantaana, shirkaddu waxay samaysay xarun tijaabo oo horumarsan, waxay soo bandhigtay aaladaha imtixaanka ugu horumarsan, qalabka cabbiraadda dhererka, spectrometer, sawir qaade, mitirka wareega, mitirka gariirka, mitirka qallafsanaanta, falanqeeyaha biraha meteloolka ah, dhaliyaha tijaabada nolosha iyo qalabka kale ee wax lagu cabiro iwm. tayada badeecada dhamaanteed dacwad oogista, waxqabadka dhamaystiran ee alaabooyinka kormeerka dhamaystiran, hubi in JITO ay gaarto heerka alaabada cillad la'aanta ah products Alaabtayada waxaa lala jaan qaaday macaamiil badan oo OEM ah oo diimeed iyo shisheeye ah, loona dhoofiyey Midowga Yurub, koonfurta america, waqooyiga america, koonfur-bari asiya, bariga dhexe, africa iyo 30 wadan oo kale.
JITO oo la socota nolol dheer, saxnaan sare iyo waxqabad sare ayaa ku guuleystay kalsoonida macaamiisheenna, waxaan sameyn doonnaa dadaal joogto ah oo aan ugu abuureyno macaamiil qiimo iyo maal badan. Ku soo dhawow gacanta oo la socda shirkadda JITO, si aad u abuurto berri qurux badan！